We.com.mm - သင့်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေ အမြဲတမ်းလှပနေအောင် ဂရုစိုက်ပေးသင့်တဲ့အချက် (၅) ချက်…
နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေဆိုတာက ခြောက်သွေ့ကွဲအက်တာတွေမရှိပဲ စိုပြေပြီးနူးညံ့နေမှလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှပနေမှာပေါ့…။ တကယ်လို့ သင့်နှုတ်ခမ်းတွေက ကွဲအက်ပြီးခြောက်သွေ့နေမယ်ဆိုရင်လည်း နှုတ်ခမ်းလှလှလေးတွေဆိုးထားလည်း သင့်နှုတ်ခမ်းက လှပနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်…။ ဒါကြောင့် သင့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေ အမြဲတမ်းလိုလို နူးညံ့ပြီးစိုပြေနေစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
အုန်းဆီက အလှအပအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆီတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…။ အုန်းဆီက နှုတ်ခမ်းသားကိုနူးညံ့စေပြီး နှုတ်ခမ်းအက်ကွဲတာတွေနဲ့ ခြောက်သွေ့တာတွေကိုလည်း လျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် မနက်တစ်ခါ ညဘက်တစ်ခါ အုန်းဆီကိုလက်နဲ့တို့ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုပွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို လှပလာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
သကြားကနှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့တာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်…။ နှုတ်ခမ်းမှာ ခြောက်သွေ့မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သကြားကိုပျားရည်နဲ့အနည်းငယ်ရောပြီး ပွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်နှုတ်ခမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ခြောက်သွေ့တာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
၃. ကော်ဖီသောက်တာတွေကို လျော့ပါ…
သင်က ကော်ဖီကိုအရမ်းစွဲစွဲမြဲမြဲကြိုက်ပြီး သောက်ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ကော်ဖီသောက်တာတွေကို လျော့သင့်ပါတယ်နော်…။ ကော်ဖီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ ကဖင်းဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေတာကြောင့် သင့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်း အမြဲတမ်းခြောက်သွေ့နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၄. Matt နှုတ်ခမ်းနီတွေ ဆိုးတာကိုလျော့ပါ…
Matt နှုတ်ခမ်းနီတွေက လှပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ခြောက်သွေ့မှုတွေ ကွဲအက်တာတွေကို ပိုပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…။ Matt နှုတ်ခမ်းနီတွေကို ဆိုးလို့ရပေမယ့် မဆိုးခင်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းသားလေးကို စိုနေအောင် Vaseline လေးနဲ့အရင်ပွတ်ထားပေးသင့်ပါတယ်…။
၅. ရေများများသောက်ပြီး အသီးနှံတွေလည်း များများစားပေးပါ…
ရေများများသောက်ပေးခြင်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ကောင်းစွာပြည့်ဝစေပြီး နှုတ်ခမ်းခြောက်တာတွေကိုလည်း သက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ နှုတ်ခမ်းတွေကို နူးညံ့နေစေဖိုပအတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဓိကလိုအပ်တာက ရေဓာတ်ဖြစ်တာကြောင့် ရေဓာတ်များစွာပါတဲ့ အသီးအနှံတွေကိုလည်း များများစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်နော်…။
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဟန်ပေါက်ချင်ရင် ဒီလိုမိတ်ကပ်ပြင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
Fenty Beauty ရဲ့ Summer 2018 Make Up Collection အသစ်